Gaa na Ọdọ Titicaca, iju na Peru | Akụkọ Njem
Gaa Leta Ọdọ Mmiri Titicaca, iju na Peru
Mariela Carril | | Peru, Ihe ị ga-ahụ
Gịnị kpatara Ọdọ Mmiri Tititica? N'ihi na ọ bụ ọdọ mmiri kacha agagharị na ụwa yana n'ihi na ọ gbanyere mkpọrọgwụ na ọdịbendị obodo ruo ọtụtụ puku afọ. Ọ bụ otu n'ime kacha ewu ewu na Peruvian njem nleta ebe nkiri n'ụwa ma ọ bụrụ na ị gaa njem ị gaghị eleghara ya anya.
Peru na Bolivia na-ekerịta ọmarịcha enyo a nke mmiri na n'etiti akwụkwọ ozi ndị ama ama bụ nke ụgbọ mmiri ụmụ amaala nke gụchara ya kemgbe ọtụtụ narị afọ. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị mara ya otú ahụ, anyị ga-ahapụ gị ozi bara uru ime ya.
2 Gaa na Ọdọ Mmiri Titicaca
Peru nwere akụkụ nke ọdọ mmiri ka ukwuu karịa Bolivia agbata obi ya. Osimiri a nwere omimi nke ihe kariri 100 mita, obu ezie na o ruru ihe ruru 300 na ebe kachasi omimi ya. N'ezie bụ mmiri mmiri abụọ nke dị warara n'etiti ha, Strait nke Tiquina, nke mita 780, nke ụgbọ mmiri gafere. Mmiri nwere nkezi okpomọkụ nke 13ºC yabụ ha dị ezigbo mma ma gbanwee ọtụtụ oge nke afọ. Ọ bụrụ n ’ịga n’oge ọkọchị, ị ga - enwe ike ihu oke ifufe na - asọ oyi n’elu ya, dịka ọmụmaatụ.
Ọ bụ ọdọ mmiri nke mmiri ya na-efu 90% n'ihi evaporation, yabụ enwere obere ihe na-asọba na osimiri. Ha bụ ntakịrị mmiri nnu na mmiri dị kristal ọ bụ ezie na n’afọ ndị na-adịbeghị anya, e nwebeghị ụkọ nke ebe ndị mmadụ merụrụ. O doro anya o nwere ufodu osimiri na otutu agwaetiti, nke eke na aka. Agwaetiti ndị a na-emepụta ihe bụ ihe ochie ochie nke ọdọ mmiri ma jiri ahịhịa amị mee.
Ọ bụ ihe agwaetiti nke uros, agbụrụ nke bi na ịkụ azụ na ịchụ nta ma dịrị ọtụtụ narị afọ agwaetiti na-ese n'elu mmiri na cattails. Agwaetiti ndị mbụ dị ma dịrị n'akụkụ Peruvian, mana dịka ha bụ ọganihu ndị njem na afọ ndị na-adịbeghị anya, e wuru ha n'akụkụ Bolivian. Gagharịa na a "Caballito de totora"Dị ka ha na-agwa ụgbọ mmiri nke Uros, ọ bụ ihe ị nwere ike ma mee.
Gaa na Ọdọ Mmiri Titicaca
Ọdọ nwere ike ruru si dị iche iche anāchi achi, asatọ na ngụkọta na niile dị na Mpaghara Puno. Mgbe ahụ, Puno bụ nnukwu ebe njem nleta na otu n’ime ebe ndị kachasị mma na South America.
Ndị Spen bidoro obodo Puno na 1668 yabụ ọ bụ nnukwu ebe ị hụ ite agbaze ọdịbendị. Ị nwere ike sonye Lima na Puno n'ụgbọ elu, enwere ọdụ ụgbọ elu na Juliaca nke dị naanị ọkara awa site na Puno, ma ọ bụ site na bọs ọha ma ọ bụ nke onwe. Site na bọs ọha na eze njem bụ ihe dị ka awa 18 na-enweghị etiti nkwụsị na nkeonwe ọrụ, enwere Peru Hop, ọ bụ nke elu na ala ịda ma na-akwụsị tinyere dum ụzọ.
Naanị nchara iri site na square nke Puno bụ nnukwu ọdọ mmiri ma ebe ahụ ị nwere ike ịhụ uros na-akpụ ụgbọ mmiri amị ma ọ bụ gbazite ụgbọ mmiri. Ga-abịarukwu nso iji mechie azụmahịa ahụ, yabụ ọ dị mfe. Njem gaa agwaetiti ndị na-ese n’elu mmiri na-ewe awa abụọ. I nwekwara ike iku njem na nkwari akụ ma ọ bụ na ihe gị n'ụlọnga ma ọ ga-eri gị a bit ọzọ.
Gha mkpuchi, mkpuchi gụnyere njem gaa n’ọdọ mmiri ahụ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ahụmịhe nke na-aga n’ihu ntakịrị, ịnwere ike isi na Osimiri sere n’elu wee banye isi n’ebe ahụ Agwaetiti Taquille, bụ́ ebe ihe dị ka puku mmadụ abụọ bi na-asụ Quechua, bụ́ asụsụ a na-asụ n’obodo ahụ. Emechara njem ahụ zuru oke n'oge n'ihi na Taquile ị nwere ike ịga na square ya na ahịa ya, zụọ ahịa ma rie ihe. Ekwe ihe dị ka awa isii na mkpokọta gụnyere njem ụgbọ mmiri.
Nhọrọ ozo bu rahụ n'abalị na Amantani Island ma ọ bụ mee kayak. A maara ije ndị a na aha nke Titicayak a na-enyekwa ha kpọmkwem na Llachón. Amantaní bụ agbata obi nke Taquile mana ọ naghị agakarị. Ihe dị ka puku mmadụ anọ bi n’ebe a na-akọ ugbo. Enwere ihe ochie hapụrụ ihe omimi Omenala Tiahuanaco na aka ole na ole magburu onwe ya echiche. Ọ bụrụ na nkà mmụta ihe ochie na ihe omimi ya bụ ihe gị, nke jupụtara ebe a, ị nwekwara ike ịmara Sillustani pre Inca na-eli ozu, n’akụkụ Ọdọ Mmiri Umayo, nke dị nso na Puno.
Emeela ili ahụ n'ụdị ụlọ elu, a na-akpọ ha chullipas, sokwa na omenaala Qulla nke ndị Incas meriri na narị afọ nke XNUMX. Ọ bụ ezie na a na-ahụ akụkụ ndị a na ndị ọzọ nke otu ọdịnala niile na altiplano, ndị a, ndị nke SillustaniHa bụ ndị kacha mma echekwara. Enwere ihe dịka 90 nke ụlọ ndị a ma ọ bụ ụlọ ndị nwụrụ anwụ ma ị ga-ahụ na ejirila nkume mgbawa ndị dị nso wuru ha.
N’aka ozo, ima ihe okike? Mgbe ahụ ị nwere ike ịchọpụta ya na Ọdọ Mmiri Ọdọ Mmiri Titicaca. Ọ nwere mpaghara abụọ, otu dị na Bay nke Puno ma na-echekwa ahịhịa amị ndị dị mkpa maka obodo ndị ọzọ na nke ọzọ dị na mpaghara Huancané, ebe elebara anya na obere nleta kamakwa ọgaranya na ụdị na-atọ ụtọ. Ndị a bụ ụfọdụ Dị nnụnụ 600, azụ azụ 14 na ụdị 18 nke amphibians.
Eziokwu bụ na ebe mara mma a kwesịrị ogologo oge karịa ka ọ dị na mbụ, yabụ ọ bụ ezigbo echiche ịnọ ụbọchị ole na ole ma hapụ onwe gị ka ọdịbendị na mmetụta nke obodo ahụ dị. Nwere ike ịnọ na ala ma ọ bụ hie ụra na Taquille ma ọ bụ Amantaní, dịka ọmụmaatụ. Ma ọ bụrụ na ị na-achọ ihe dị jụụ enwere Agwaetiti Anapia, otu n'ime agwaetiti ise ndị dị n'akụkụ nke Ọdọ Mmiri Winaymarka, nke kasị dịrị nso na Bolivia. Ndị obodo na-eme mmemme njem nleta nke gụnyere ebe obibi, nri, na mmemme.
Younu abughi onye njem nleta na a azu paaki ma nwere akpa na ime ụlọ ịwụ zuru oke? Mgbe ahụ ị pụrụ ịkwụ ụgwọ ndị nleta ndị Agwaetiti Suasi nke bụ naanị agwaetiti dị na Lake Titicaca. Lee ya ebe a Lọ Andean, ụlọ obibi na ebe obibi nke na-enye ahụmịhe zuru oke na ezigbo okomoko: nri nri, sauna, kayak, hiking. Agwaetiti a dị n'ebe ugwu nke ọdọ mmiri ahụ ihe dị ka awa anọ site na Puno ruo Juliaca n'ụgbọ mmiri nke ọdọ ahụ. Boatgbọ mmiri a kwụsị na mmiri na-ese n’elu mmiri nke Uros na Tauqille ka ị gaa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Peru » Gaa Leta Ọdọ Mmiri Titicaca, iju na Peru
Ihe ị ga-ahụ na agwaetiti Krit